ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အဲသည်ခေတ်ကို မလွမ်းချင်တော့ဘူး”
အရိုးအရင်းကလည်း တဆွေလုံးတမျိုးလုံး သူဌေးစားရင်းဝင်စေသကိုး.... ဒါကြောင့်ပေါ့ ... ဟီရိ ရော သြတပ္ပ ရော ပျောက်နေတာ...
အခုအချိန်သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်ခေတ်ဆိုရင် ကောင်မလေးတွေတစ်ယောက်မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး...ဟိ ။
“မှန်ပါ။ ဘုန်းတော်ကြောင့် အကုန်လုံး ပြောင်ပြီ ဖုယာ့”
အဲလေ.. အကုန်လုံး ဖတ်ရှုပြီးပါပြီ ဖုယာ့။
သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စံနစ်မှာကမှ မင်းကျင့်တရားဆိုတာကို လိုက်နာတာ ရှိသေးတယ်။ အခုနအဖ ကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်ကတော့ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်ခေတ်တုန်းကထက် အများကြီး နှိပ့်ကျသေးတယ်။ ဒီတော့ ကိုပေါရေ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်ခေတ်မှာ လူဖြစ်ရတာထက် အခု နအဖခေတ်မှာ လူဖြစ်ရတာက ပိုဆိုးတယ်လို့ ကျွန်မက မြင်တယ်။ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ ဘုရင့်နောင် အလောင်းဘုရား ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်ခေတ်တွေတုန်းက သူများနိုင်ငံကို ရန်မူကျူးကျော်စော်ကားပြီး စစ်သွားတိုက်တာ တခုပဲ ပြောစရာရှိတယ်။ စစ်လိုက်တိုက်ရတာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ နအဖလက်ထက်မှာထက် ပိုပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဘ၀လုံခြုံမှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှု ပိုလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
နောင်လာမယ့် ဘယ် ဂျင်နရေးရှင်းမှ ဒီလို အလွန်တရာမှ စိတ်ပျက်ဖွယ်စက်ဆုပ်ဖွယ်ခေတ်ဆိုးကြီးနဲ့ မကြုံရပါစေနဲ့ လို့ .....
I am so sorry for Burma. Once, it was the richest in SEA.
အရူးဘုံမြှောက် ချေးခြောက် ကေါက်စား
သန်းရွှေ နဲ. မိသားစုကတော.
ဘေးက မြှောက်ထိုးပင်.ကေါ်တွေကြောင်.
အရူး က လက်နှက် ကိုင်ပြီး ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းတာကို
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို. ဘယ်လောက် သီးခံ နေကြအုံးမလဲ ။